Asidra sucinika miorina amin'ny biolojika / famokarana ambongadiny vita amin'ny biolojika | Landian
Famokarana asidra succinika biolojika amin'ny teknolojia fermentation microbial: ny teknolojia dia avy amin'ny vondrona mpikaroka zhang xueli mpikaroka momba ny "institiotaut teknolojia mikraoba indostrialy, Akademia siansa momba ny siansa (tianjin)". Ity teknolojia ity dia mandray ny tsiranoka vita amin'ny laoniny mahery indrindra eto amin'izao tontolo izao.
Ny akora dia avy amin'ny siramamy starch azo havaozina, ny fizotry ny famokarana mihidy manontolo, ny mari-pahaizana momba ny kalitaon'ny vokatra dia mahatratra ny kalitaon'ny vokatra tsara nasionaly. Ny famokarana biocarbon asidra succônika amin'ny fomba fanamainana biolojika dia nahatratra 90%.
1, ampiasaina amin'ny famokarana sodium glutamate, sodium succinate, fitehirizana sakafo, zava-manitra, zava-manitra ary additives sakafo hafa izay akora fototra.
2. Ireo akora ilaina amin'ny famolavolana ny plastika biodegradable PBS, PBST ary PBSA.As ho fitaovana vaovao malaza, ny plastika plastika biodegradable dia manana tombony lehibe eo amin'ireo fitaovana mitovy amin'izany, toy ny fanoherana ny hafanana avo sy ny hamafisana avo lenta.PBS dia azo ovaina hamokarana PBST sy PBSA, izay be mpampiasa amin'ny famolavolana tsindrona, indostria tsofina, indostria fibre ary foam.
3, ampiasaina amin'ny famokarana succinimide, nylon 54 ary fitaovana polymer hafa amin'ny akora fototra.
4. Fitaovana fanampiana amin'ny famokarana vokatra surfactant
Manaraka: Bio-based 1, 4-butanediol (BDO)
Succinic asidra ao amin'ny Farmacii
Ny firafitra sy ny fampiasana asidra succaine
Asidra Sucine amin'ny sakafo
Asidra Succinic Mw
Rafitra asidra succaine
Mampiasa asidra Succinic
Asidra Succinic ≥99.5%